Maxay Macdantu Jirka U Qabtaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — December 27, 2019
Macadnta waxa ay kamid tahay nafaqadda lagama maar-maanka ah ee jirkeenna ubbaahan yahay. Macdanta waxa ay ka qeyb qaadataa joogteynta caafimaadka shaqsiga,sidoo kale waxay door muhiin ah ka cayaartaa koritaanka,Taranka iyo Xilliga nuujinta .
Macdanta jirkeenna ubbaahan yahay waxaa kamid Ah:
Soodiyam koloraadh (Sodium chloride) iyo
Maxay Macadanta Jirkeenna U Qabataa?
Macdanta waxa ay ka qeyb qaaddataa sameynta lafaha iyo ilkaha.
Waxa ay laga maar-maan u tahay sameynta xinjirowga dhiigga.
Macdantu waxa ay noo sameysaa dheecanada dheefshiidka.
Waxa ay ka qeyb qaaddataa koritaanka uur jiifka.
Waxa ay noo sameyaan dheecanada jirka sida: Dhididka, Candhuufta iyo Kaadida.
Macdanta waxa ay noo sameysaa unugayada dhiigga.
Waxa ay caawiyaan unugyada difaaca jirka.
Calaamadaha Lagu Garto Macdanta Marka Ay Jirka Ku Yaraato Waxaa Kamid Ah:
Dhiciska mararka qaar waxaa sababo macdanta jirka Hooyada ku jirto oo aad u yar.
Korniinshaha ilmaha oo istaagga waxa ay kamid tahay calaamadaha muujinaayo in macdanta ku yar tahay jirka.
Lafaha oo qafiif ku imaado taasina waxa ay sahleysaa lafaha in ay dhaqso jabaan. Tusaalle: Haddii qofka kursi ka dhaco oo kale inuu jabo.
Omateetka oo yaraado.
Dhaawac oo dhaqso reysan waayo.
Murqaha qofka oo wada shaqeyn waayaan.
Miisaanka ruuxa oo lumo.
Xaaladaha qaarna qofka waa uu u dhiman karaa haddii jirkiisa laga waayo macadanta noocyadeeda kale duwan.
Xagee laga Helaa Macadanta?
Qudaarta cagaaran sida bagalka ansalaatda.
Tags: Maxay Macdantu Jirka U Qabtaa?
Next post Kafeega Caafimaadka Ma U Fiican Yahay?!
Previous post Bilacda Magaalooyinka Soomaaliya Miyaa Laga Quustay!?